Taunggyi - The Cherry Land: 7/1/07 - 8/1/07
တနေ့က FUJI Studio မှာ Mix down သွားဆွဲရင်းနဲ့ တောင်ကြီးက ဂီတ၀ါသနာပါသူတွေအတွက် တောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ Recording Studio တွေအကြောင်း ဖေါ်ပြပေးနိုင်ရင်
ကောင်းမယ်လို့စိတ်ကူးရလို့ လက်လှမ်းမီသလောက် တင်ပြသွားပါ့မယ်....
တောင်ကြီးမှာ ကျွန်တော်သိသလောက် Recording Studio ခုနှစ်ခုလောက်ရှိပါတယ်...
1. Win Studio
2. Fuji Studio
3. Three Seasons Studio
4. De & De Studio
5. Yin Yin & Sons Studio
6. Tun Studio
7. Flying Dragon Studio ဆိုပြီးရှိပါလိမ့်မယ်....
ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ information အဆင်သင့်ရှိတဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ Flying Dragon Studio အကြောင်းကနေပဲ စပြောပါ့မယ်…
Studio ဆိုပေမဲ့ တကယ်တော့ Workstation လေးပေါ့…
တည်နေရာကတော့ ည-၄၅၅၊ မြင့်မိုရ်လမ်း၊ ညောင်ပင်သာရပ် မှာရှိပါတယ်…
စ၀်စံထွန်းဈေးရှေ့ က (၃)လိုင်းကားဂိတ်နားမှာပေါ့...
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းကတော့ ၀၉ ၅၂၁ ၃၅၉၃ ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်..
အများဆုံးတော့ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားသီချင်းတွေ လာသွင်းကြပါတယ်... မြန်မာသီချင်းတွေသွင်းနေတာလဲရှိပါတယ်...
တစ်ခုတည်းသော Control Room
Flying Dragon Studio ရဲ့ Engineer ခွန်လှမွန်
Vocal & Recording Room
Flying Dragon Studio မှာသုံးတဲ့ Recording Interface ပုံပါ... Presonus ကထုတ်တဲ့ Inspire1394 ကိုသုံးပါတယ်..
Audio Resolution 24bit, Sample rate 96kHz နဲ့ latency 1.5ms ထိရပါတယ်...
Input4ခု ပါပါတယ် Guitar Preamp, Mic Preamp နဲ့ Line in တွေပါတော့ Small studio တွေအတွက်အတော်ပဲပေါ့...
Unit4ခုအထိ ချိတ်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်... 16 inputs အထိပေါ့... အခုလောလောဆယ်တော့4in ပဲရှိသေးတယ်....
Inspire1394 ရဲ့ Control Panel ပုံပါ....
ဒါကတော့ Control room monitor ပါ... M-Audio ရဲ့ BX5a ကိုသုံးပါတယ်...
US မှာတော့ M-Audio BX Series သုံးရင် BX8a ကိုသုံးကြတယ်... ကျွန်တော်ကတော့ BX8a မတတ်နိုင်လို့ 5a နဲ့ပဲ ကြေနပ်နေရတယ်
Recording Software အနေနဲ့ကတော့ Steinberg Nuendo3ကိုသုံးပါတယ်...
ကျွန်တော့မှာ Acoustic Drum တော့မရှိဘူး... ဒါကတော့ Flying Dragon Studio မှာသုံးတဲ့ Drum Module တစ်ခုပါ... BFD လို့ ခေါ်ပါတယ်... Acoustic Drum သံထွက်ပါတယ်...
ဒီဟာကလဲ Acoustic Drum module နောက်တစ်ခုပေါ့... EZ Drummer လို့ခေါ်ပါတယ်...
ဒါကတော့ GuitarRig လို့ခေါ်ပါတယ်... Guitar Effect Processor ပေါ့...
Guitar Combo လို့ခေါ်ပါတယ်... Guitar Amp Simulator ပေါ့... AC Box, Plexi နဲ့ Twang ဆိုပြီ3းမျိုးရှိပါတယ်...
ဒါကတော့ Propeller head ကထုတ်တဲ့ Reason ဆိုတဲ့ software ပါ... သူကတော့ Sampler တွေနဲ့ Synthesizer မျိုးစုံပါပြီး Sequencer အနေနဲ့ရော KB/Drum module အနေနဲ့ရော သုံးပါတယ်...
ဒါကတော့ FL Studio ပါ... FL Studio ကတော့ အသိများကြတဲ့အတွက် မရှင်းပြတော့ပါဘူး... Version 6.0.8, XXL Producer Edition ကိုသုံးပါတယ်...
Recording tasks အားလုံးပြီးရင် Mastering လုပ်ဖို့တော့ Steinberg WaveLab5ကိုသုံးပါတယ်...
အခုဖေါ်ပြခဲ့တာကတော့ Flying Dragon Studio မှာသုံးတဲ့ Software & Plug-in တွေထဲက အနည်းအကျဉ်း အမြည်းသဘောလောက်ပါ...
တကယ်တမ်း Recording လုပ်တဲ့အခါသုံးတာတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ...
Computer Music ၀ါသနာပါသူ၊ စိတ်ဝင်စားသူများ မေးလို့ရပါတယ်...သိသလောက်ပြောပြပါ့မယ်...
မိမိသိထားတာတွေ ပြန်ပြောပြကြမယ်ဆိုရင်လဲ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုပါတယ်...
တောင်ကြီးမှ Studio များအကြောင်း Informaiton လေးတွေသွားစုပြီး ဆက်လက်တင်ပြပါ့မယ်.......
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 11:07:00 PM5ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရေးသားသူ နေလင်း အချိန် 5:25:00 PM9ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
လူတော်တော်များများက တက္ကသိုလ်ဘ၀ကို ပြန်ပြောင်း အောက်မေ့လေ့ ရှိကြပေမယ့် ကျမကတော့ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ဘ၀ထက် အထက်တန်း ကျောင်းသား ဘ၀ကို အလွမ်း ပိုမိပါတယ်။
ဘယ်ကျောင်းကလဲလို့ မေးရင် ထ (၄)က လို့ အမြဲ ဂုဏ်ယူစွာ ပြောနိုင်အောင်ပဲ တောင်ကြီး အ.ထ.က (၄) က တောင်ကြီးမြို့ ဂုဏ်ဆောင် ကျောင်းတစ်ကျောင်း ဆိုရင် မမှားဘူး ထင်ပါတယ်။
အ.ထ.က (၄) ရဲ့ ကျောင်းတော်ရိပ်ကို ငါးတန်းကျောင်းသူ အဖြစ်နဲ့ စတင် ခိုလှုံခဲ့တယ်။ အလွန်စည်းကမ်းကြီးတဲ့ ကျောင်းအုပ် ဆရာမကြီး ဒေါအေးချစ်ကို အရင်ဆုံး သိခဲ့ရတယ်။ ဆရာမကြီး ကျောင်းတစ်ပါတ် လှည့်ကြည့် လိုက်ရင် ကျောင်းကြီး တစ်ကျောင်းလုံး အပ်ကျသံတောင် မကြားရအောင် တိတ်သွားခဲ့တယ် ဆိုရင် ဘယ်လောက် စည်းကမ်းကြီးတယ် ဆိုတာ မှန်းကြည့်လို့ ရမှာပါ။
တောင်ကြီးမှာ ကျောင်းတက်ရတာနဲ့ တခြားမြို့တွေမှာ ကျောင်းတက်ရတာနဲ့ အဓိက ကွာခြားချက်ကိုတော့ တန်ဆောင်တိုင် ရောက်တိုင်း မေ့နိုင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တန်ဆောင်တိုင်နား နီးရင် တောင်ကြီးက ကျောင်းသားတွေကို ဘယ်လိုမှ စာကျက်ခိုင်းလို့ မရတော့လို့ ဆရာမအားလုံး စိတ်ညစ်ကြရတယ်။ အားလုံးရဲ့ စိတ်က ဘုံကထိန်ဆီ ရောက်နေပြီလေ။ အားလုံးက ဒီတစ်နှစ် ဘာအရုပ် ချိုးမယ်။ တစ်ခြားကျောင်းထက် ဘယ်လို သာအောင် လုပ်မယ်ဆိုတာ နေ့မအား ညမအား စဉ်းစားနေကြတယ်။ ဘုံကထိန်က အတန်းထဲက ကျောင်းသားတွေကို ပိုပြီး စည်းလုံးစေခဲ့တယ်။ ဒီလို အတွေ့ အကြုံမျိုးကို တခြား ဘယ်မြို့က ကျောင်းသားမှ ရနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျမထင်တယ်။
ချယ်ရီဆိုလို့ ကျမ မှတ်မိသလောက် ၆တန်း ၇တန်းလောက်အထိ ကျောင်းထဲမှာ ချယ်ရီပင် အချို့ ရှိခဲ့တယ်။ ချယ်ရီပန်းတွေ ပွင့်ချိန်ရောက်ရင် ဆရာမတွေကော ကျောင်းသားတွေပါ ချယ်ရီပန်းတွေ အလုအယက် ခူးခဲ့ကြဖူးတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းဝင်းထဲမှာ ချယ်ရီပင်တွေ ရှိသေးလားဆိုတာ အခုမှ ပြန်စဉ်းစားမိတယ်။
P.S ကျောင်းရဲ့ပုံကို တင်ပေးချင်ပေမယ့် ကျောင်းနဲ့ ဝေးတဲ့ တစ်နေရာမှာ ရောက်နေလို့ မတင်ပေးနိုင်လိုက်ဘူး။
ရေးသားသူ Unknown အချိန် 3:08:00 PM5ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
Fuse လို့ခေါ်တဲ့ စနစ်ကြိုးလေးတွေက ယမ်း လုပ်ငန်း လုပ်ရာမှာ တော်တော် အသုံးဝင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် လေ့လာမိသလောက် စနစ်ကြိုး ပုံစံတွေ တော်တော်များများရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့
Paper Tape Quick Match
အဲဒီ စနစ်တွေ ထဲမှာ Black Match က အခြေခံ အကြဆုံးပါ။ Black Match တခုရဲ့ လောင်ကြွမ်းချိန်က ယေဘူယျ အားဖြင့် ၁ လက်မ ကို ၁ စက္ကန့်ပါ။ ကျွန်တော် တို့ အသုံးပြုတဲ့ Black Powder အရည်အသွေး ပေါ်မှု တည်ပြီးမှ လောင်ကြွမ်းချိန် တွေ ကွာခြားသွားမှာပါ။
Black Match ကို ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ပါဝင်မှုတွေက......
Black Powder : 30%
Dextrin : 3% (ကော်မျိုးနွယ်ဝင်)
Black Match ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်း
စက္ကူခွက် ၂ လုံး
spray ဘူး ၁ ခု
တုတ်တံ ၁ ချောင်း
1. Black Powder 30% နှင့် Dextrin 3% ကို စက္ကူခွက်တွင်း ထည့်ပါ။ ပြီးလျှင် သမအောင်မွှေပါ။
2. spray ဘူးထဲသို့ အရက်ပျံ 25% နှင့် ရေ 75% ရောပါ။
3.အဖုံးတွင် အပေါက် ဖောက်ထားသော စက္ကူခွက် အလွတ် တလုံး ထဲသို့ (1) မှ ဟာကို ပြောင်းထည့်ပါ။
4. spray ဖြင့်ဖြန်း ပါ။ သမအောင်မွှေပါ။
5. နိုင်လွန်ကြိုးကို ခွက်တွင်ထည့်ပါ။ ၁ မိနစ်ခန့် မွှေပေးပါ။
6. နိုင်လွန်ကြိုးကို အခြောက်ခံပါ။ (ရက်အနည်းငယ်ကြာသည်အထိ)
Black Match လို့ခေါ်ပါတယ်
လိုအပ်တဲ့ tools တွေပါ။
ပလပ်စတစ် အဖုံးကို ဒီလို အပေါက် ဖောက်တယ်။
နိုင်လွန်ကြိုးကို ၁ မိနစ်လောက် မွှေဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
Black Match ကို movie အနေနဲ့ ကြည့်ချင် တဲ့သူတွေ အတွက် ဒီမှာ ယူပါ။
ရေးသားသူ ကျော်စွာ အချိန် 11:54:00 AM5ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 11:14:00 AM2ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
တောင်‌ကြီးမြို့သို့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ရောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်… ဒီအတိုင်းပဲ အလည်သွားတာပါ… ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နီးပါမှာ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ တောင်ကြီးမြို့ကို ရောက်ခဲ့တယ်.. အဓိက ကတော့ သတင်းအချက်အလက်နဲ့ ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေနဲ့ပေါ့ အားလုံးရဲ့ အကူအညီတွေနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာ ICT ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများစွာကို လုပ်ကိုင်ခွင့် ရခဲ့တယ်… ဒီလိုနဲ့ပဲ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်းမှာ ပထမအကြိမ် သတင်းအချက်အလက် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာပြပွဲတစ်ခု ပြသနိုင်ဖို့ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကူညီပေး ခဲ့တယ်…. အဲဒီ ပြပွဲကြီးကလဲ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိတော့ အောင်မြင်ခဲ့ ပါတယ်….
တစ်ပြိုင်နက် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း (ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်းနဲ့ ကွန်ပျူတာ လုပ်ငန်းရှင်အသင်း)ကိုပါ တပြိုင်တည်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတယ် ဆိုပါစို့…..
အဲဒီလိုနဲ့ နောက်ပိုင်း တောင်ကြီးကိုရောက်တိုင်း ရှမ်း(တောင်) ရဲ့ ICT အခြေအနေဟာ မထင်လောက်အောင်ကို တိုးတက်လာပါတယ်… တောင်ကြီးမြို့ပေါ်မှာ Internet သုံးစွဲမှုကလည်း အရှိန်အဟုန်နဲ့ကို များပြားလာတာ တွေ့မြင်ရတယ်…. တောင်ကြီးသား မဟုတ်ပေမဲ့ ရှမ်း(တောင်)ကိုတော့ သံယောဇဉ် ဖြစ်မိတာအမှန်ပဲ… ကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေကို အမြန်ဆုံး ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးချင်ပါတယ်...
ICT ကဏ္ဍတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်လိုတဲ့ လူငယ်တွေဟာ အတော်ကို စုစည်းမိနေတာကို သတိပြုမိ ပါတယ်… နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြန့်ဝေတဲ့ ဟောပြောပွဲတွေ အပတ်စဉ် လုပ်ကြတာမြင်ရတာ ကြည်နူးမိတယ်...
ဟိုပုန်း၊ မိုင်းပွန်၊ လွိုင်လင်၊ ပင်လုံ၊ လဲချား၊ အောင်ပန်း၊ ကလော၊ ညောင်ရွှေ၊ အဲဒီဒေသတွေကို ရောက်ဖူးတယ်... အခုနောက်ဆုံး တစ်ခေါက် ရောက်တော့ စဉ်းစားမိတာတစ်ခုက ရှမ်း(တောင်)မှာရှိတဲ့ မြို့တွေမှာVoice Communication စနစ်ရှိဖို့ ဆောင်ရွက် ပေးချင်ခဲ့တယ်... ရန်ကုန်ပြန်တဲ့ လမ်းခရီးမှာ အတွေးနှစ်ခု ပါလာတယ်... တစ်ခုက Internet သုံးစွဲသူတွေ အဆင်ပြေဖို့ Bandwidth တိုးမြှင့်ဖို့နဲ့ နောက်တစ်ခုက နယ်မြို့တွေမှာ Voice Communication စနစ် ကောင်းမွန်ဖို့ပါပဲ... တောင်ကြီးမြို့ခံ တွေကလည်း ICT ကဏ္ဍတိုးတက်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတယ်... ကျွန်တော်လည်း အဲဒါကိုပဲ ပိုမိုတိုးတက်အောင် တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကူညီဖို့ပါပဲ... အဓိကကတော့ ရှမ်း(တောင်)ရဲ့ ICT ကဏ္ဍဟာ အရင်ကထက် အဆပေါင်းများစွာ တိုးတက်လာတယ် ဆိုတာကို ပြောချင်ပါတယ်... ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကွန်ပျူတာအသင်းတွေကလည်း စည်းစည်းလုံးလုံး ဒီထက်ပ်ိုပြီး ကြိုးစားသွားရင် နောက်နှစ် အနည်းငယ်လောက်မှာ ရှမ်း(တောင်)ရဲ့ ICT ကဏ္ဍဟာ မြို့ကြီးတွေမှာလိုပဲ တိုးတက်လာမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်နေတယ်ဗျာ...
"ပြိုင်တူတွန်းရင် ရွေ့နိုင်ပါသည်" ဆိုတဲ့ စကားလေးကိုတော့ သဘောကျမိ တယ်ဗျာ...
(Note: ယခုလောလောဆယ် တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ Internet Bandwidth က Total 10MB ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကို Internet Client တွေ Share လုပ်ပြီး သုံးနေပါတယ်။ Client တစ်ဦးချင်းအနေနဲ့ ADSL ကို 256Mbps, 128Mbps နဲ့ အသီးသီးသုံးစွဲ နေကြပါတယ်။ iPSter လဲ Client ၂ခု၊ ၃ခုလောက် ရှိပါတယ်။ အများစုကတော့ ADSL ပဲ သုံးကြပါတယ်။ ADSL Client ဘယ်နှစ်ခု ရှိပြီလဲ ဆိုတာတော့ သေသေချာချာ မသိသေးပါ။ အသင်းရုံးခန်း ဓါတ်ပုံကတော့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးလို့ မထည့်ပေးလိုက်တာ စိတ်မရှိပါနဲ့ ကိုငြိမ်းချမ်းဌေး ခင်ဗျား Admin)
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 9:54:00 AM3ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ကျွန်တော်လည်း ဒီတစ်ခေါက် တောင်ကြီးက ပြန်လာပြီးကတည်းက ခင်ဗျားတို့ကို အားကျလို့ ကိုယ်ပိုင် blog တစ်ခုလုပ်ထားတယ်… နည်းပညာပိုင်းအရ မလုပ်တတ်တာရော၊ ဘာအကြောင်း တင်ရမလဲဆိုတာရော စဉ်းစားရင်းက ကျွန်တော့် ကောင်မလေးကလဲ" မလောပါနဲ့ ကောင်းအောင်ဖြည်းဖြည်း စဉ်းစားပြီးမှရေးပါ " ဆိုတာရယ်ကြောင့် ဘာမှကိုမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး…
တောင်ကြီးသား မဟုတ်ပေမဲ့ တောင်ကြီး(ရှမ်းတောင်)ကို သံယောဇဉ် ရှိနေတော့ ခင်ဗျားတို့ Blog ကို အားဖြည့်မယ်လို့ စဉ်းစားခဲ့တယ်… ဒီတစ်ခါတော့ တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ လိုအပ်နေတဲ့ အရာလေးတစ်ခုလို့ ထင်တာကို ရေးလိုက်ချင်တယ်…
တစ်ခါက တောင်ကြီးကို ရောက်တော့ အသိလူကြီးတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောရင်း သူကပြောတယ် " ရှမ်းတောင်လာတဲ့ နိုင်ငံသား ခရီးသွားတွေက ပင်းတယ၊ ကလော၊ အင်းလေးထဲကို ၀င်သွားကြတယ်… တောင်ကြီးမြို့ပေါ် တက်မလာကြဘူး"တဲ့ အဲဒီစကားလေးကို စဉ်းစားမိရင်း တောင်ကြီးမြို့ပေါ်မှာ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်မဲ့ အရာတစ်ခု လိုအပ်နေတယ်လို့ ထင်တယ်ဗျာ…
တောင်ကြီးမြို့ပေါ်က သိသမျှ စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ တွေ့တော့ သူတို့တွေက "မိုင်းရှူးခေတ်လောက် စီးပွားရေးမကောင်းဘူး" ဆိုပြီး ညည်းကြတယ်… အင်းလေးဒေသဆိုရင် အင်းလေးကန်ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှု့၊ အင်းလေး ဓလေ့ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှု့တွေကြောင့် နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားတွေ ၁၂ရာသီပတ်လုံး မပြတ်အောင် လာကြတယ်…ဒါကြောင့် တောင်ကြီးမြို့ပေါ်ကို နိုင်ငံခြား ခရီးသွားတွေ တက်လာဖို့ တစ်ခုခုလိုနေတယ်ဆိုတာ သေချာတယ်… ကျွန်တော် စဉ်းစားမိတာ တစ်ခုကတော့ တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ အထင်ကရ နာမည်ကြီးတဲ့ မီးပုံးပျံလုပ်တာတို့၊ မီးပုံပျံ လွှတ်တင်တာတို့ကို နေရာလေးတစ်ခု သတ်မှတ်ပြီး လုပ်ပြရင် ကောင်းမယ်… နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားတွေကို မီးပုံးပျံ ကိုယ်တိုင်လုပ်၊ ကိုယ်တိုင် လွှတ်တင်တဲ့ လုပ်ငန်းလေး တစ်ခုနဲ့ ဆွဲဆောင်လို့ ရနိုင်မယ်လို့ ထင်တယ်… နောက်တစ်ခုက (လုပ်လို့ရ၊ မရတော့မသိဘူး) မီးပုံးပျံ စီးပြီး တောင်ကြီးနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ရူ့ခင်းတွေကို လေ့လာကြည့်ရူ့တာတို့ကို လုပ်နိုင်ရင် ကောင်းမယ်ဗျာ… (ပုဂံမှာ မီးပုံးပျံစီးပြီး ပုဂံရူ့ခင်းတွေကို ကြည့်တာမျိုးကို ဆိုလိုတာပါ။) ခင်ဗျားတို့ အပါအ၀င် အားလုံး တောင်ကြီးမြို့ကြီး ယခုထက် ပိုစည်ကားပြီး စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ကျွန်တော် ပြောပြတဲ့ အရာလေးကို ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေး ကြပါဦး… ဒါအပြင် တခြားခရီးသွား နိုင်ငံခြားသားတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်မဲ့ အရာလေးတွေ ရှိရင်လည်း စဉ်းစားပြီး အကောင်အထည် ဖော်ပေးရင်းနဲ့ တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ လိုအပ်နေတဲ့ ကွပ်လပ်လေးတစ်ခုကို ဖြည့်ဆည်းပေးကြ ပါစို့လားဗျာ…
(စာကြွှင်း။ ။ ဒီစီးပွားရေး လမ်းစလေးကို ခင်ဗျားတို့ အကောင်အထည် ဖော်လို့ အောင်မြင်ခဲ့ရင် ကျွန်တော်ကိုတော့ ပစ်မထားကြနဲ့ဗျာ… :) )
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 9:37:00 AM 17 ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ဒီတခါကတော့ Disney ကြက်ကြော်ဆိုင်ကို မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ လူငယ်တွေကြားမှာ ရေပန်းအစားဆုံး ဆိုင်တစ်ဆိုင်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေရာက အရှေ့မြို့ပတ်လမ်းနဲ့ အ၀ိုင်းပတ်လမ်းဒေါင့်မှာ ရှိပါတယ်။ တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ တစ်ခုတည်းသော အ၀ိုင်းနားမှာပါ။
ကြက်သား၊ အာလူး အကြော်ခန်း
အဓိက နာမည်ကြီးတဲ့ အစားအစာက အမေရိကန် ကြက်ကြော်နဲ့ ပြင်သစ် အာလူးကြော်ရယ်၊ Cocktail တွေရယ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်က မမလေးတွေ ဆိုရင် တောင်ကြီးရောက်ရင် Cocktail သောက်ဖို့ Disney ကိုပဲ ပြေးကြပါတယ်။ ( Cocktail လောက်ပဲ သောက်တတ်တဲ့ သူတွေကို ပြောတာပါ။ ဒီထက် ပျင်းပျင်း သောက်တက် သူများအတွက်တော့ တခြား ဆိုင်ကောင်းကောင်းတွေ သွားရမယ်နဲ့ တူပါတယ်။ :) ) နောက်ပြီး Mandalay ရေခဲမုန့်လဲ ရတယ်လို့ တွေ့ရပါတယ်။ တခြား Light နဲ့ Heavy Food တွေ လဲ ရပါတယ်။
Menu ပါ ရိုက်တုန်းက မှောင်နေလို့ ၀ါးသွားပါတယ်။
တခြားမြို့က ဧည့်သည်တွေ လာရင်လဲ Disney လိုမျိုးဆိုင်ကို ရွေးကြတာများပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကလဲ အသင့်အတင့်မို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ စာအုပ်စင်လေးလဲ ရှိလို့ အပျင်းပြေ စာဖတ်လို့ ရပါသေးတယ်။ ကလေးငယ်လေး ပါသော မိသားစုတွေ အတွက်လဲ အဆင်ပြေအောင် Child Chair လေးတွေလဲ စီစဉ်ပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဆိုင်လေးကလဲ တောင်ကြီးမြို့မှာ တော်တော်လေးလဲ ကြာပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ အခြား အကင်ဆိုင်တွေ အကြော်ဆိုင်အသစ်တွေ ဖွင့်လာလဲ Disney မှာတော့ လူပုံမှန်ရှိပါတယ်။ ဆိုင်က တည်တည် ငြိမ်ငြိမ်လေးရှိပါတယ်။ ပြင်ပြင်ဆင်ဆင်လေးလဲ လုပ်ထားပါတယ်။ ထူးခြားတာလေးတစ်ခုက တစ်ခုခုစားလို့ အမှိုက်ထည့်ချင်ရင် စာရွက်ခေါက်လေးနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ စ(က်ကူ)ခွက်လေးတွေ သုံးရတာပါ။ တခြား ဆိုင်တွေမှာတော့ အဲ့ဒီလို စာရွက်ခေါက်လေးတွေကို သုံးတာ မတွေ့မိဘူး။ ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ဖို့ မေ့သွားတာတော့ ခွင့်လွတ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့တွေ မကြာမကြာ သွားထိုင်ဖြစ်တဲ့ ဆိုင်လေးပါ။ ထိုင်လို့၊ သောက်လို့၊ စားလို့ ကောင်းသောဆိုင် တစ်ဆိုင်ပေါ့။ တောင်ကြီးရောင်လို့ Disney မရောင်ဖူးခဲ့ဘူးဆိုရင် တောင်ကြီးမြို့ မနှံဘူးလို့ ယူဆလို့ ရပါတယ်။ တခြားမြို့က ဧည့်သည်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အိမ်ရှင် တောင်ကြီးသားတွေက Disney မှာ ဧည့်မခံဘူးဆိုရင် စိတ်သာ ဆိုးပြီး၊ ဒေါသထွက် ပြလိုက်ပါတော့။ :)
မှာစားဖြစ်ခဲ့တဲ့ ထမင်းနဲ့ အာလူးကြော်
တောင်ကြီး ချယ်ရီမြေမှာ ထိုင်လို့ ကောင်းသော ဆိုင်များဆိုပြီး မိတ်ဆက်ပေးလာခဲ့တာ အားလုံးလဲ နှစ်သက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ကို ဘယ်သူမှ ကလဲ sponsor မပေးပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာပဲ သွားလည်၊ မှာစား၊ ဓါတ်ပုံရိုက်၊ ပိုက်ဆံရှင်းနဲ့ တောင်ကြီးချယ်ရီမြေမှာ တင်ပေးဖို့ လုံးပမ်းရတယ်။ လူတွေ က ဘာလဲဟ Camera တဖျက်ဖျက်နဲ့ ဆိုပြီး၊ ကြည့်တာလဲ တစ်ခါတစ်ခါ ခံရသေးဗျ။ အော် တောင်ကြီးချယ်ရီ Blog ကို စမိတာလဲ ရင်မောရ ပါလားနော်။
ဒါပေမဲ့လဲ ကိုယ်ရေးတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး၊ Comment လေးတွေ ကြားရရင်တော့ စိတ်ချမ်းသာ ရတာပေါ့လေ။
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 10:53:00 PM 18 ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
တောင်ကြီးအကြောင်းပြောတဲ့အခါ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေပဲ ပြောဖြစ်နေတယ်။
ရွှေဘုန်းပွင့်နဲ့ မြစိမ်းတောင်အကြားက သဘာဝလှိုဏ်ဂူတစ်ခုပါ။ကျားဂူလို့ ခေါ်ကြတယ်။
အဲ့ဒီတုန်းက 1995 ခုနှစ်လောက်ဖြစ်မယ်။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တောတောင်တွေအကြားအပျော်သွားလည်ရင်း အဲ့ဒီကိုရောက်သွားတယ်။
ဂူအထဲမှာအတော်ကျယ်တယ်။ ၀င်သွားပြီးမှ အထဲမှာထမင်းစားကြတာ။
ဂူကမှောင်တော့ ဖယောင်းတိုင်တွေထွန်းပြီး စားကြတာပေါ့။
နောက်တစ်ဆင့်ကိုတွေ့ရတယ်။ ဂူကနှစ်ဆင့်( နှစ်ထပ် )ဂူ။
အပေါ်နဲ့အောက် အဆင့်အကြားမှာက ၇ ပေလောက်အမြင့်ကွာတယ်။
ပြန်တက်တော့မယ်လုပ်တော့ ဆင်းလာတုန်းကအသာလေးဆင်းလာတဲ့ ၇ ပေအမြင့်အပေါ်အဆင့် က
တက်လို့မရလို့ ထူပူနေတဲ့ကြားမှာ လူကတစ်နေရာတည်း ( အပေါ်အဆင့်ကိုတက်တဲ့နေရာ )မှာ
အဲ့အချိန်မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ငိုပါလေရော။
ကျွန်တော်လည်း အတွေးတစ်ခုရလိုက်တယ်။ ရေစိုပြီးချောနေတဲ့ အပေါ်အဆင့်ကိုတက်ဖို့
သကောင့်သားတွေက အပေါ်အဆင့်လည်းရောက်ရော နောက်ကိုလုံးဝလည့်မကြည့်တမ်းပြေးကြတယ်။
ကိုယ်ကလည်း နောက်ဆုံးကနေလိုက်ပြေးရတယ်။ ဂူထဲမှာလည်း ဖယောင်းတိုင်ထွန်းထားတော့ လေကအတော်ကုန်နေပြီး ဆေးလိပ်ငွေ့တွေကြောင့်လည်း အူထူနေပြီလေ။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ သဘာဝအလင်းရောင်ရဲ့ တန်ဖိုးကို ဂူအ၀ကိုလှမ်းမြင်လိုက်တာနဲ့ ကောင်းကောင်းသိသွားတယ်။
အပြင်လည်းရောက်ရော မောကြီးပန်းကြီးနဲ့ အသက်ကောင်းကောင်းရှုပြီး အတော့်ကိုလန့်သွားကြတယ်။
နောက်သိပ်မကြာပါဘူး ငိုတဲ့သူငယ်ချင်းရော၊လန့်သွားတဲ့ ကျွန်တော်အပါအ၀င်သူငယ်ချင်းတွေအားလုံး ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုမေ့သွားပြီး တဟီးဟီးတဟားဟားနဲ့ တောင်အောက်ပြန်ဆင်းလာခဲ့ကြတယ်။
ရေးသားသူ Ko Myo အချိန် 1:45:00 PM2ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ကျွန်တော် မီးပုံးပျံ ယမ်း ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ နည်းနည်း ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်က တော့ ယမ်း ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာမှ မတတ်ကျွမ်း ပါဘူး။ တိုင်းတပါးက ယမ်း နည်းပညာ တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ရုံသပ်သပ်ပါ။ ယမ်း ပညာရှင် များကလည်း ၀ိုင်းဝန်း ဆွေးနွေးပေးကြပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ အခု black powder လို့ခေါ်တဲ့ အခြေခံ ယမ်း လုပ်နည်း ကို ပြောပြပါမယ်။black powder ကို ဘာလို့ အရင်မိတ်ဆက်ပေးရလဲ ဆိုရင် သူက အခြား ယမ်းပိုင်း ဆိုင်ရာ မှာ အခြေခံ အကျ ဆုံးဖြစ်လို့ပါပဲ။ black powder ကို အခြားနာမည် တွေနဲ့ ခေါ်ကြပါသေးတယ်။ လူသိအများဆုံးအခေါ် ကတော့ gun powderပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ black powder လိုပဲ ဆက်လက် သုံးစွဲသွားမှာပါ။ black powder ပြုလုပ် ဖို့ဆို ဒါတွေလိုပါတယ်။
Potassium Nitrate : 150 grams
Charcoal Powder : 30 grams
Sulfur : 20 grams
black powder ရဲ့ သဘောက တွန်းကန် အားပါ။ အဲဒါကြောင့် black powder တွေကို roman candles , Stars တို့လုပ်တဲ့ နေရာမှာ အသုံးများပါတယ်။ အဲဒီ အကြောင်းတွေ နောက်ပိုင်း ဆက်လက် တင်ပေးသွားပါမယ်။ အပေါ်က ဟာကို အချိုးချ ကြည့်ရင် 75%,15%,10% ပါ။ အခု လို chemical တွေ ပေါင်း စပ်ရုံနဲ့ မရသေးပါဘူး။ black powder ပြင်းပြင်းလေး လိုချင်တယ် ဆိုရင် နောက်တခု ထပ်လုပ်ရပါဦးမယ်။ အဲ တခုပြောစရာ ကျန်သေးတာက Charcoal powder ပါ။ သူက ရိုးရိုးမီးသွေး မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်း မီးသွေးပါ။ ကျောက်မီးသွေး စစ်စစ် ဆိုရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ အပေါ်က chemical သုံးခုကို ဓါတ်ပြုပေါင်းစပ် ပေးဖို့လိုပါတယ်။ Ball Mill ကို အသုံးပြုပြီး ဓါတ်ပြုပေးရမှာပါ။ Ball Mill ဆိုတာ ခွက်တလုံးထဲမှာ ခဲသီး လေးတွေ ထည့်ထားတာကို ခေါ်တာပါ။ သူတို့ ဆီမှာတော့ Ball Mill ကို သပ်သပ် ရောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က တော့ Ball Mill ကို ကိုယ့်ဟာကို လုပ်ယူလို့ ရပါတယ်။
1. Black Pownder ကို Ball Mill ထဲကို ထည့်ပါ။
2. Ball Mill ကို လှည့်ပေးပါ။
3. 1hr မှ 24hr အတွင်း လှည့်ပေးပါ။
4. Black Powder ကို ပြန်လည် စစ်ထုပ် ပါ။
Black Powder နဲ့ Ball Mill ထဲက ခဲသီးလေးတွေ ဓါတ်ပြု ပေးစေချင်လို့ပါ။ Ball Mill ကို ကြာကြာလှည့်ပေးလေ.. Black Powder ပိုပြင်းလေပါ။
black powder ကို Ball Mill ထဲ ထည့်တဲ့ ပုံပါ
Ball Mill ကို လှည့်တဲ့ ပုံပါ
နောက်ဆုံး Black Powder တွေ ပြန်စစ်ထုတ် နေတာပါ။
ရေးသားသူ ကျော်စွာ အချိန် 12:02:00 PM 38 ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
သူငယ်ချင်းမိသားစုနဲ့ တောင်ကြီး သွားတုန်း တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်လေး တခု အကြောင်းပါ။ ရန်ကုန်ပြန်မဲ့မနက်မှာ တောင်ကြီးမြို့တခုလုံးကို စီးမြင်ရတဲ့ ရှုခင်းလည်း ခံစားရင်း၊ ဘုရားလည်းဖူးရင်း ဆိုသလို မြစိမ်းတောင်၊ ရွှေဘုန်းပွင့် စတဲ့ တောင်ပေါ်က ဘုရားတွေကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ မြစိမ်းတောင်ပေါ်ရောက်တော့ ကျွန်မတို့က ဘုရားမဖူးသေးခင် ရှုခင်းတွေကြည့်ဖို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့လောက်ပဲ အားသန်နေတော့ ဒီဆိုင်းဘုတ်လေးကို မတွေ့မိပါဘူး။ ဒါနဲ့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းရဲ့ဖေဖေက ခေါ်ပြီး ဆိုင်းဘုတ်လေးကို ဖတ်ခိုင်းပါတယ်။ အန်ကယ်ဆရာဝန်ကြီးက “သမီးတို့ရေ..ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်တဲ့ စာလည်း လာဖတ်ကြည့်ပါ” လို့ပြောတော့ ကျွန်မတို့လည်း ဓာတ်ပုံရိုက်၊ အဝေးက ရှုခင်းကြည့်နေရာက အန်ကယ်ပြတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်လေးကို ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ စာလေးကအဓိပ္ပါယ် ရှိတာနဲ့အတူ အားလုံးကိုလည်း တရားသဘောနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြထားတာကြောင့် အန်ကယ်ကဓာတ်ပုံရိုက်ယူခဲ့တာပါ။ ကျွန်မအတွက် သတိရရင် ရသလို ခဏခဏ ထုတ်ဖတ်ဖြစ်တဲ့စာတခုဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ အားလုံးလည်း ဖတ်လို့ရအောင် တောင်ကြီးချယ်ရီမြေမှာ ဝေမျှပေးလိုက်ပါရစေ။
အခုဆိုရင် ကျွန်မသူငယ်ချင်းနဲ့ရော ၊သူ့မိသားစုနဲ့ပါ အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် ဝေးနေကြပေမယ့် စိတ်ချင်းကတော့ နီးနေတုန်းပါပဲ။ ၂၀၀၄ ဧပြီတုန်းက သွားခဲ့တဲ့ တောင်ကြီးခရီးဟာ အခုဆိုရင် ၃ နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ အဲဒီ့တုန်းက ဓာတ်ပုံတွေပြန်ကြည့်မိရင် မနေ့တနေ့ကမှ တောင်ကြီးက ပြန်ရောက်လာသလိုမျိုး ခံစားရပါတယ်။
ဒီနေ့ဟာ ၀ါဆိုလပြည့်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်တာဆိုတော့ ဒီပို့စ်ကိုလည်းရေးရင်း ကျွန်မရဲ့ မိဘ ၂ ပါးနဲ့အတူ သမီးရင်းနဲ့မခြား ချစ်ခင် ဂရုစိုက်တဲ့ အန်ကယ်နဲ့ အန်တီကို စိတ်က ရည်မှန်းရင်း ကန်တော့လိုက်ပါရစေ။
ရေးသားသူ Ma Yangon Thu အချိန် 10:20:00 PM 8 ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရှမ်းပြည်နယ် သစ်သီးဝလံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်- ပြပွဲ၊ ပြိုင်ပွဲနှင့် ဆွေးနွေးပွဲ
ရှမ်းပြည်နယ် သစ်သီးဝလံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်- ပြပွဲ၊ ပြိုင်ပွဲနှင့် ဆွေးနွေးပွဲ ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် ယခင် မီးပုံးပျံကွင်းအဟောင်း နေရာမှာ ကျင်းပမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဖိတ်စာလေးပါ။ တောင်ကြီးအတွက် ထူးထူးဆန်းဆန်းပွဲလေးမို့ သတင်းတစ်ခု အနေနဲ့ ဖော်ပြလိုက်တာပါ။
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 10:18:00 PM 11 ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ဒါပေမဲ့ မျက်လုံးချင်းတော့ ကွာတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ မင်းနဲငါ ရန်တွေဖြစ်ကြမယ်။
တကယ်တော့ ရေရယ်၊ ဖန်ခွက်ရယ်
အရင်က ပြည့်နေတယ်လို့ မင်းယူဆလို့ ဖြစ်မယ်။
ငါတို့ အတွက် တ၀က်ရှိပြီ
နောက် တ၀က် ငါတို့ထက်ဖြည့်မည်။
ဆိုးယုတ်ခြင်း အတွေးတွေကို ဖယ်ကြမည်။
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 9:44:00 PM6ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရေးသားသူ နေလင်း အချိန် 9:02:00 PM 10 ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
တောင်ကြီးချယ်ရီမြေ Blog စပြီး ဖြစ်တည်လာခဲ့တာ ၂လဆိုတဲ့ အချိန် ပြည့်တော့ပါမယ်။ Post တွေလဲ ၁၀၀ ပြည့်ဖို့ ၁ခုပဲ လိုပါတော့တယ်။ ၀ိုင်းဝန်းရေးသားကြတဲ့ Author တွေကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လာရောက် ကြည့်ရှုကြတဲ့ အနီး၊ အဝေး ဧည့်သည်များကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ CBox နဲ့ Comments တွေမှာ Participate လုပ်ပေးကြသူများကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောလိုပါတယ်။
တောင်ကြီး ချယ်ရီမြေ အနေနဲ့ ၀င်ရေးချင်လို့ ပြောထားကြသူတွေကိုလဲ အစဉ်သဖြင့် ကြိုဆိုလက်ခံပြီး Author ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ တောင်ကြီး ချယ်ရီမြေမှာ အထူးပါဝင် ရေးသားပေးမယ်လို့ ယူဆရသူများကိုလဲ သီးသန့် Invite လုပ်ပြီး Author ဖြစ်စေခဲ့ ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့လဲ အချို့ Author များ အနေနဲ့ တောင်ကြီးချယ်ရီ ၂လ ပြည့်တော့မဲ့ အချိန်တိုင်အောင် Post တစ်ခုမှ မတင်နိုင်သေးတာလဲ တွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် Post မတင်ရသေးသော Author များကိုလဲ ဒီ Blog အတွက် နဲနဲလောက်ဖြစ်ဖြစ် ကျိုးစားပေး စေချင်ပါတယ်။
Post တစ်ခုမှ တင်ဖို့ရာ အချိန်မပေးနိုင်မယ့် Author တွေကို သူတို့ အနေနဲ့ တောင်ကြီးချယ်ရီမြေကြောင့် ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုး မဖြစ်စေချင်သည်က တစ်ကြောင်း၊ Post တစ်ခုမှ မတင်ဘဲ Author ဆိုသော နာမည်ကိုလည်း သူတို့မှလဲ လိုချင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆမိသည်က တစ်ကြောင်း၊ စတဲ့ အကြောင်းရပ်တွေကြောင့် တောင်ကြီး ချယ်ရီမြေ ရဲ့ ၂လပြည့်မဲ့ သြဂုတ်လ ၅ရက်နေ့ အထိ၊ Post မတင်နိုင်သော Author များကို Author စာရင်းမှ ပြန်လည် ထုတ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ တောင်ကြီးချယ်ရီမြေ Blogကို စည်စည်ကားကားနဲ့ အများအတွက် တစ်စုံတစ်ခု ပေးစွမ်းနိုင်ဖို့၊ ကိုယ်မွေးဖွားရာ၊ နေထိုင်ရာ ဒေသကို ဒီ Blog နဲ့ ပြန်လည် အကျိုးပြုနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး၊ အင်တိုက်အားတိုက် ကျိုးစားပမ်းစား ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာပါ။ အထိုက် အလျောက်လဲ အောင်မြင်မှု ရတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ Blog မှာ ပါဝင်တဲ့ Information နဲ့ Photo တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ တက်နိုင်သမျှ Update ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ၊ Photo တွေကို ဒီ Blog မှာ တင်ပေးထားပါတယ်။ အဲ့ဒီ Information တွေ၊ Photo တွေကို အကြောင်းကြောင်းကြောင့် တစ်ခြားနေရာမှာ ကူးယူဖော်ပြမယ်ဆိုပါက Author များကို လေးစားသောအားဖြင့် မည်သည် မှ ရယူထားကြောင်း Reference လုပ်ပေးစေချင် ပါတယ်။ Author များ အနေနဲ့လဲ မိမိကိုယ်ပိုင် မဟုတ်တဲ့ Data တွေပါရှိပါက တက်နိုင်သမျှ ရည်ညွှန်းချက် ထည့်ပေးစေချင် ပါတယ်။ ဒါမှလဲ ပိုင်ရှင်များကို အသိအမှတ် ပြုရာ ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Blog ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် ကျန်တဲ့ အခြား ကန့်သက်ချက်တွေ မရှိပါဘူး။ လွတ်လပ်စွာ ကူးယူနိုင်ပါတယ်၊ ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။
Music Player မှာ လဲ အဝေးရောက် မြန်မာတွေ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ တက်နိုင်သမျှ ဘယ်မှာမှ မရနိုင်တဲ့ သီချင်းအသစ်တွေ၊ သီချင်းအကောင်းလေးတွေ ထည့်ပေးသွားပါမယ်။ သို့ပေမဲ့ တေးသံရှင်တွေကို အားပေးသော အနေနဲ့ မိမိကိုယ်တိုင်သာ နားထောင်ဖို့၊ Download မလုပ်ပဲ Player မှာသာ နားထောင်ဖို့၊ အခြားသူတွေကို ပြန်လည် မဖြန့်ဖို့ဝေဖို့ အသိပေးလိုပါတယ်။
Blog ရဲ့ Status လေးတွေကတော့
Number of Authors - 20
Number of Pre-Authors - 4
Number of Posts - 98
Number of Hits - 8400
Number of Comments - 115
ဆက်လက်ပြီးတော့လဲ တောင်ကြီးချယ်ရီမြေကို တစတစ ရင့်ကျက်လာအောင်၊ ဒီထက် ပိုမို ပြည့်စုံလာအောင် Contributors များ၊ Authors များမှ လုံးပမ်းသွားမည်လို့ ပြောကြားရင်း ၁၀၀ ပြည့် Post ကို ဘယ်သူက၊ ဘာတွေ တင်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ကြပါစို့လား..
ရေးပြီးတော့မှ ပြန်ဖတ်ကြည့်တယ် နဲနဲ များ လေးသွားသလားလို့.. ကျွန်တော်တို့ က ဒီ Blog ကို တက်နိုင်သမျှ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်.. :) ဒါပေမဲ့လဲ မတက်နိုင်ဘူးလေ ရေးဖို့လိုတယ် အောက့်မေ့လို့ ရေးလိုက်ရတာပါ.. နားလည်ပေးနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်..
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 4:16:00 PM4ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ဒီနေ့ ၂၉ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ ဟာဆိုရင်ဖြင့် ဒုတိယ၀ါဆိုလပြည့်နေပါ။ ဓ(မ်မ)စကြာ အခါတော်နေ့လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရဟန်းတော်တွေကို သင်္ကန်းဆပ်ကပ် လှူတန်းကြတဲ့ နေ့လဲဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ကြီးသူ တောင်ကြီးသားတွေ အလှူတွေလုပ်၊ ဘုရားကျောင်းသွားကြ၊ ဥပုဒ်စောင့်ကြနဲ့ ကောင်းမှုတွေ လုပ်တဲ့ နေ့လဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားစေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ မှာလဲ ဧည့်ပရိသတ်တွေ စည်ကားတဲ့ နေ့တစ်နေ့ပေါ့။
ကျွန်တော်လဲ ဒီနေ့ ကုသိုလ်တွေ ကိုယ့်မှာ ရအောင်လို့ ရွှေဘုန်းပွင့်ဘုရားကို သွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရောက်တာ နောက်ကျသွားလို့ နေ့လည်စာ ကျွေးတာနဲ့တော့ မဆုံဖြစ်လိုက်ဘူး။ ဘုရားပေါ်မှာတော့ လူတွေနဲ့ စည်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် Camera နဲ့ Virtual Tour လုပ်ဖို့ လိုက်ရိုက်လိုက် ပါတယ်။ ဒီနေ့ ရွှေဘုန်းပွင့် ဘုရားကို မသွားဖြစ်တဲ့သူတွေလဲ Virtually ရောက်သွားအောင် တောင်ကြီးချယ်ရီမြေ Blog ကနေ ပို့ဆောင်ပေးလိုက် ပါတယ်။
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 1:41:00 PM7ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
တောင်ကြီးမြိ့မှာ ချယ်ရီပင်တွေ နည်းလာလို့ စိတ်မကောင်းတဲ့သူတွေ၊ ချယ်ရီတွေ အရင်ကလို ဝေနေတာ ပြန်တွေ့ချင်၊ မြင်ချင်တဲ့သူတွေ အတွက် သတင်းကောင်းပါ။ အေးသာယာကနေ တောင်ပေါ် အတက်လမ်းနဲ့ တောင်အောက် အဆင်းလမ်းတွေမှာ ချယ်ရီပင်တွေ သစ်တောက စိုက်နေတာ လမ်းသွားရင်းတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ Camera မပါလို့ မရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ ချယ်ရီချစ်သူများအတွက် ကောင်းသတင်းလေး ပြန်ပြောပြတာပါ။ လမ်းဘေး တစ်လျှောက် ချယ်ရီပန်းတွေ သာမက တစ်ခြား အလှပန်းတွေ စိုက်ထားတာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ထုံးဖြူ သုတ်ထားတဲ့ ၀ါးတိုင်လေးတွေ တွေ့လို့ သေသေချာချာ ကြည့်လိုက်တာ ချယ်ရီပင်တွေ ဖြစ်နေတာ ၀မ်းသာစွာပဲ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
နောက်ပြီး ကျွန်တော်လဲ ချယ်ရီပင်တွေ တနိုင်တပိုင် စ စိုက်ပါပြီ။ အိမ်က ဥယျာဉ်လေးထဲမှာ ချယ်ရီပင်လေးတွေ သက်စိ စိုက်ထားလိုက်ပါပြီ။ [ တောင်ကြီးချယ်ရီမှာ အက်တမင်ယူထားပြီး ကိုယ်တိုင်ချယ်ရီ မစိုက်ဘူးလားလို့ အပြော မခံရအောင်ပါ။ :) ]
တကယ်တော့ တောင်ကြီးမှာ ချယ်ရီတွေ ဝေနေတာကို ကျွန်တော်လဲ မြင်ချင်ပါတယ်။ ချယ်ရီပန်းတွေ ပြန်တွေ့ ရမယ်လို့လဲ ကျွန်တော့် စိတ်ထဲ ယုံကြည်နေ ပါတယ်။
ဒီနေ့တော့ ချယ်ရီပင် တစ်ပင်အောက် ရောက်တုံး ချယ်ရီပင် ပေါက်တွေ တွေ့တာနဲ့ သက်စေ့နှုတ်ပြီး ခြံထဲက မြေလွတ်လေးမှာ ချယ်ရီဥယျာဉ်လေး လုပ်လိုက်ပါပြီ။ ပုံမှာ အပင်လေးတွေ နွမ်းနေပါတယ်။ အခုပဲစိုက်လိုက်တာပါ။ လမ်းမှာ ကြာသွားလို့ နဲနဲ နွမ်းသွားတာ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့တွေ ရှင်သန်နိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါတယ်။
နောက် ၄၊ ၅နှစ်လောက်မှာ ချယ်ရီပွင့်တွေ ဝေနေတဲ့ အပင်တွေအဖြစ် သူတို့ကို ကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 1:16:00 PM7ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရေးသားသူ ကိုချမ်း အချိန် 12:29:00 AM 8 ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာ ထင်ရှားတဲ့ မြို့ဖြစ်တဲ့ ပင်လုံမြို့ပါ။ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ စည်းလုံးမှုကို ပြနိုင်ခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စု ကျောက်တိုင်ရှိတဲ့ မြို့၊ အဲ့ဒီမြို့ ဓါတ်ပုံတွေ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် သွားတုန်းက ရိုက်လာခဲ့ တာတွေ အခုမှပြန်ရှာတွေ့လို့ Virtual Tour လုပ်ပစ် လိုက်ပါတယ်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဒီအချိန်လောက် တုန်းက ရိုက်ခဲ့တာတွေပါ။
- မဟာရဋ္ဌာမိသာမ(ဂ်ဂီ) ရွှေတိဂုံ စေတီပုံတူဘုရားပုံ
- ပင်လုံမြို့အ၀င်နဲ့ အထွက်ပုံ
- အစိုးရကွန်ပျူတာကောလိပ်(ပင်လုံ)ပုံ အခုတော့ University ဖြစ်သွားပါပြီ။
- အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(ပင်လုံ)ပုံ အခုတော့ University ဖြစ်သွားပါပြီ။
University (၂)ခုစလုံးကတော့ လွိုင်လင်မြို့ထိပ် နှစ်ဘက် မှာရှိပါတယ်။
တောင်ကြီးချယ်ရီလို့ နာမည်ပေးထားပေမဲ့ တောင်ကြီး ပါတ်ဝန်းကျင်ကမြို့တွေလဲ လက်လှမ်းမီသလောက် တင်ပေးတာပါ။ အားလုံးက တစပ်တဆက်တည်းလေ။
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 7:34:00 PM2ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ အကြီးဆုံး တရုတ် ကွမ်ရင်ဘုရားကျောင်း
ကျွန်တော်က တရုတ်စာလဲ မတတ်၊ တရုတ်ကျောင်းဆိုလို့ ဒီတစ်ခါပဲ ရောက်ဖူးတာမို့လို့ ဘာပုံတွေဆိုတာ မရှင်းပြတတ်တော့ဘူး။ တင်ပေးချင်တဲ့စိတ်ကပဲ ဦးဆောင်နေလို့ တွေ့သမျှ၊ မြင်သမျှ ရိုက်ခဲ့တဲ့ ပုံတွေကို အရှိတရားအတိုင်းပဲ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ညနေပဲ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လမ်းကြုံလို့ ၀င်ရင်းရိုက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ Virtual Tour လေး ပေါ့။ Post မရေးသေးဘူး ပြောခဲ့ကာမှ လုပ်ဖြစ်သွားပြန်ပြီ။ :)
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 7:02:00 PM5ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ တစ်ခုတည်းသော Zoo ဖြစ်ပါတယ်။ အလည်သွားဖို့ အတွက် ဓါတ်ပုံတွေ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ရွှေသမင်လား၊ ဒရယ်လား သေသေချာချာ မကြည့်မိလို့ ဘာမှန်းမသိတော့ဘူး. :)
တိုးတိုးနဲ့ စိုးစိုး ၀က်ဝံလေး (၂)ကောင်ပါ။ ဘာလို့ ခွဲထားလဲတော့ မသိဘူး။
အစားအရမ်းကြီးတဲ့ ကောင်ပေါ့၊ ငှက်ပျောသီးထက်၊ ဖရဲသီး ပိုကြိုက်တဲ့ ကောင်။ ဈေးဆိုင်မတွေ့လို့ ကျွန်တော်တို့ မုန့် မကျွေးခဲ့ရတာ စိတ်မကောင်းဘူး။
စားလိုက်၊ ပေါက့်လိုက်၊ ပါလိုက်လေ။ အစားနဲ့ ပါးစပ်နဲ့ လုံးဝမပြတ်ကြတဲ့ ကောင်လေးတွေ။ အိမ်က ယုန် (၃)ကောင်လဲ ဒီမှာ လာပို့ထားသေးတယ်။ အိမ်မှာ မွေးရတာ မနိုင်တော့လို့။ အခုတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ကြီးကုန်ရောပေါ့။
အဲ့ဒီမှာလဲ ဘာမှ မကျွေးခဲ့ရဘူး။ ညနေဆောင်းဆိုတော့ ဆိုင်တွေ မရှိဘူး။
ဂျိုးဖြူလို့ ရေးထားတယ်။ ခိုလေးတွေနဲ့တော့ တူတယ်။
ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ စီနီယာကြီးလေ ဓါတ်ပုံရိုက်နေတာ။
စွန် (၂)ကောင် မိုးအေးလို့ ကွေးနေကြတာ။
လောလောနဲ့မို့ စာတွေ မဖက်လိုက်ရဘူး။ မျက်နာလေးတောင် မမြင်လိုက်ရဘူးကွယ်။
ဒါကတော့ လူ ကျိုက်အများဆုံး မျောက်ရုံပါ။
မျောက်ကို ချိန်သလိုလိုနဲ့ ရှမ်းမလေးကိုလဲ ပါအောင်ရိုက်လိုက်တယ်။ :)
တကယ် Post ကောင်းတဲ့ ကောင်နော် (ဗိုက်ဆာနေလို့ပါ)
ဒို့ကတော့ ကျောခိုင်းထားတယ် မခေါ်ဘူး။ :)
ပျင်းတယ်ကွယ် ဗိုက်ကလဲစာ၊ မိုးကလဲအေး ကွေးတာပဲ ကောင်းတယ်။
ကျွန်တော်တို့ သွားတုန်းက မျောက်လေးတွေ ဗိုက်ဆာနေတာတွေ့ရတယ်လေ။ မုန့်ဆိုင်လဲ မတွေ့တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ထဲက တစ်ယောက်က သကြားလုံးတွေ၊ အာလူးကြော်တွေ၊ နဲ့ ရသမျှမုန့်တွေ သွားဝယ်ပြီး ကြွေးလိုက်တာ.. အလုအယက်ပဲ စားကြတယ်။ အဲ့ဒီမှာပဲ ကျွန်တော်တို့ အချိန်တော်တော်ကုန်သွားခဲ့ကြတယ်။
နောက်ဆုံးမှ ရောက်လာတဲ့ ၀က်ဝံလေး(၂)ကောင်ပါ။ နာမည် ဘယ်လိုပေးထားလဲ မသိဘူး။
ရှုခင်းသာ Zoo စဖွင့်တုန်းက မိချောင်းပေါက်လေး တစ်ကောင်လဲ ရှိသေးတယ်။ သူ့ခမျာ တောင်ပေါ်မိချောင်း ဖြစ်လိုက်သေး တယ်။ ရာသီဥတုကြောင့်ထင်တယ် သေသွားတာ မကြာသေးဘူး။ သူ့ အိမ်/ကန် လေးပဲ ကျန်တော့တယ်။ ဓါတ်ပုံတော့ မရိုက်ခဲ့တော့ဘူး။
ဟိုလျှောက်ကြည့် ဒီလျှောက်ကြည့်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ တွေ တော်တော်နဲ့ မပြန်ချင်ခဲ့ဘူး။ နောက်ဆုံး မိုးမည်းကြီး လာတော့မှပဲ ကျွန်တော်တို့တတွေ ကမန်းကတန်း ပြေးကြရပါတော့တယ်။ သက်လုံကောင်းမကောင်း အဲ့ဒီတော့မှပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ရှုခင်းသာပန်းခြံ ခရီးစဉ် ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အပြန်မှာတော့ သဲကြီးမဲကြီး မိုးတွေရွာလို့ပေါ့။
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 11:49:00 AM9ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
အညွှန်း: VirtualTour, သွားလည်စရာ